काठमाडौं – चर्चित अमेरिकी कम्पनी गुगलको ‘गुगल म्याम्प’ ले सगरमाथा चीनमा रहेको देखिएको विषयमा समस्या स्वीकार गर्दै त्यसलाई छिट्टै समाधान गर्ने बताएको छ । समस्याको बारेमा नेपालमा रहेको गुगल म्याप मेकरको ...
तपाई्रले विदेशबाट ल्याउनुभएको वा अवैध रुपमा आयात भएको मोबाइल सेट बोक्नुभएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने होस् गर्नुहोस्, तपाईं्रको मोबाइल फोन ब्लक नै हुन सक्छ । तपाईंले बोकेको मोबाइल सेटको ...
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरवर्ग फेसबुकमा गालि, वेईजत्ती र मानहानीका लागि प्रयोग हुने शव्दबाट चिन्तित छन् । जुकरबर्गले सामाजिक सञ्जालमा आप्रवासीप्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न छोड्नु पर्ने बताउनुभएको छ । ...
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपाललाई स्पेसल ट्रेड प्रेफरेन्सेस (विशेष व्यापार ग्राह्यता) दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने कानुनमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कानुनले गलैँचा, टोपी, च्यादर, गलबन्दी र यात्रा सामग्री लगायत ६६ ...
झनै लम्बिन सक्छ इयूको कालोसूची
युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई २ वर्षदेखि कालोसूचीमा राखिरहेको छ । नेपाललाई हुने हवाई दुर्घटना दरलाई मुख्य विषय बनाएर इयुले नेपाललाई कालोसूचीबाट छुटाएको छैन । सन् २०१५ मा शून्य दुर्घटनादर रहेकाले ...
काठमाडौं, २७ माघ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निधन निमोनियाँलगायत रोगका कारण भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोइरालाको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.करवीरनाथ योगीका अनुसार मुख्य रूपमा निमोनियाँले गर्दा ...
साना साना शिशुहरु रुनका कारण जो कोहीले थाहै पाउँदैनन् । स्वयम आमालाई समेत बच्चाको भाषा थाहा पाउन मुस्किल पर्छ । उनीहरुलाई के भइरहेको छ ? कहाँ दुखेको हो ? केहीपछि भन्न ...
एजेन्सी । अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्दै आएको वाई–फाईमा कुनै डाटा ट्रान्सफर र डाउनलोड गर्नु प¥यो भने धेरै नै समय लाग्छ । अव यो समस्याबाट चाँडै नै तपाइ मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । ...
काठमाडौं– के तपाईले मोबाइलबाट इन्टनेट चलाउँदा धेरै पैसा काटेको अनुभव गर्नु भएको छ । कतिपयले धेरै पैसा काटेको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायकहरुप्रति नकारात्मक धारणा समेत राख्न्ने गरेको पाइएको छ । तर, ...
होस गर्नुस सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिलाई साथी बनाउँदा तपाईंलाई उसले फसाउन सक्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसङ्गै फेसबुक, ट्विटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने अर्को ...
काठमाडौं: कांग्रेसले प्रदेश, क्षेत्रीय र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा संरचना बनाउन अग्रसर भएपछि सभापतिइतर समूह पनि संरचनामा आफ्नो पकड बनाउने रणनीति तय गर्न जुटेको ...